Effectiveness of Breast Enhancing Creams - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Effectiveness of Breast Enhancing Creams
ရငျသားကွီးထှားစတေဲ့လိမျးဆေးတှကေ တကယျရော ထိရောကျရဲ့လား?
ရငျသားကွီးထှားစတေဲ့ လိမျးဆေးကွောငွာတှေ အရတော့ လိမျးပွီး သိသိသာသာထူးခွားသှားတာတှရေ့မှာပါ။ ဒီကွောငွာတှလေို လကျတှမှေ့ာရောထိရောကျမှုရှိရဲ့လားဆိုတာ သိခငျြကွမှာပါ။ ခှဲစိတျပွုပွငျတဲ့ ဆရာဝနျတှေ ကတော့ ဒီလိမျးဆေးတှကေ အကြိုးမရှိဘူးလို့ပွောလရှေိ့ပါတယျ။
ရငျသားကွီးထှားဖို့ဖွဈနိုငျ မဖွဈနိုငျ သိဖို့ဆိုရငျ ရငျသားရဲ့ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျပုံကို အရငျသိထားဖို့လိုပါတယျ။ မိနျးကလေးတှပေိုငျဆိုငျထားတဲ့ ရငျသားဟာ အပျေါဆုံးမွငျရတဲ့ရငျသားအရပွေားအောကျမှာ အဆီခဲ အလုံးလေးတှေ၊ နို့ရညျထှကျမယျ့ ပွှနျလေးတှေ၊ အဆီနဲ့ နို့ရညျပွှနျကို ခြိတျဆကျပေးထားတဲ့ ကွှကျသားမြှငျသေးသေးလေးတှနေဲ့ ပုံစံကြ လှပအောငျတညျဆောကျထားပါတယျ။ ဒီ အဆီ၊တှရေဲ့အောကျမှာမှ ရငျဘကျကွှကျသား အကွီးတှဖွေဈတဲ့ ရငျအုပျကွှကျသား Major, Minor ဆိုတဲ့ကွှကျသားမွောငျးတှရှေိပါတယျ။ မိနျးကလေးတိုငျးဟာ ဒီလိုရငျသားတညျဆောကျပုံနဲ့ ရှိပါတယျ။ ရငျသားဖှံ့ထှားတဲ့ မိနျးကလေးတှကေ အဆီခဲလေးတှေ ပိုရှိနတောဖွဈပွီး ရငျသားသေးပါတယျဆိုတဲ့ မိနျးကလေးတှကေ ဒီအဆီလေးတှနေညျးနတောပါတဲ့။ ဒါဆို လိမျးဆေးလိမျးရုံနဲ့ ရငျသားကွီးထှားဖို့ဆိုတာ သိပျမဖွဈနိုငျဘူးပေါ့နျော။
အမြားအားဖွငျ့ ဒီလိမျးဆေးတှဟော သဘာဝပစ်စညျးတှနေဲ့ ထုတျထားလရှေိ့ပွီး ဒီသဘာဝပစ်စညျးတှကေပဲ အမြိုးသမီးဟျောမုနျး အီစတိုဂငျြထှကျအောငျလှုံ့ဆျောပေးပါတယျ။ ရလဒျအနနေဲ့ကတော့ အီစတိုဂငျြဟျောမုနျးကွောငျ့ ရငျသားဖှံ့ထှားလာနိုငျတယျဆိုတဲ့ အခကျြပါ။ ဒီလိမျးဆေးတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ တိကတြဲ့ သကျသေ၊ ရလဒျရယျလို့တော့ မရှိပါဘူး။ လိမျးဆေးတှရေဲ့ ရလဒျက လူတဈယောကျခွငျးဆီရဲ့ ဟျောမုနျးပမာဏ၊ တုံ့ပွနျမှုတှပေျေါမူတညျပွီးကှာခွားနိုငျပါတယျတဲ့။တဈခြို့က သိသာတယျဆိုပမေယျ့ ကိုယျ့ကမြှ မသိသာတာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျတဲ့။ ဒါပမေယျ့ တခြို့လိမျးဆေးတှကေတြော့လညျး အီစတိုဂငျြဟျောမုနျး ဖွဈစတေဲ့ DEHA ဆိုတဲ့ ဟျောမုနျးပါပါတယျ။ ဟျောမုနျးကွောငျ့ ရငျသားကွီးထှားတာပိုသိသာနိုငျတယျဆိုပမေယျ့ အန်တရာယျပိုမြားပါတယျ။ ရငျသားယောငျယမျးတာတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ DEHA ပါတဲ့ ပစ်စညျးကိုတော့ ရှောငျကွညျသငျ့ပါတယျ။ဘယျလိမျးဆေးမဆို ဟျောမုနျးပွောငျးလဲခွငျးဖွဈစလေို့ ရရှေညျစှဲသုံးရငျတော့ ရငျသားကငျဆာဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးကတော့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီး ရငျသားတငျးရငျးအောငျလုပျမယျ၊ သငျ့တျောတဲ့ Bra size ကို ရှေးဝယျဝတျမယျဆိုရငျ ယုံကွညျမှုရှိရှိလှပစမှောပါ။
ရင်သားကြီးထွားစေတဲ့လိမ်းဆေးတွေက တကယ်ရော ထိရောက်ရဲ့လား?
ရင်သားကြီးထွားစေတဲ့ လိမ်းဆေးကြောငြာတွေ အရတော့ လိမ်းပြီး သိသိသာသာထူးခြားသွားတာတွေ့ရမှာပါ။ ဒီကြောငြာတွေလို လက်တွေ့မှာရောထိရောက်မှုရှိရဲ့လားဆိုတာ သိချင်ကြမှာပါ။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်တဲ့ ဆရာဝန်တွေ ကတော့ ဒီလိမ်းဆေးတွေက အကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
ရင်သားကြီးထွားဖို့ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် သိဖို့ဆိုရင် ရင်သားရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို အရင်သိထားဖို့လိုပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ရင်သားဟာ အပေါ်ဆုံးမြင်ရတဲ့ရင်သားအရေပြားအောက်မှာ အဆီခဲ အလုံးလေးတွေ၊ နို့ရည်ထွက်မယ့် ပြွန်လေးတွေ၊ အဆီနဲ့ နို့ရည်ပြွန်ကို ချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ ကြွက်သားမျှင်သေးသေးလေးတွေနဲ့ ပုံစံကျ လှပအောင်တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဒီ အဆီ၊တွေရဲ့အောက်မှာမှ ရင်ဘက်ကြွက်သား အကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ရင်အုပ်ကြွက်သား Major, Minor ဆိုတဲ့ကြွက်သားမြောင်းတွေရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးတိုင်းဟာ ဒီလိုရင်သားတည်ဆောက်ပုံနဲ့ ရှိပါတယ်။ ရင်သားဖွံ့ထွားတဲ့ မိန်းကလေးတွေက အဆီခဲလေးတွေ ပိုရှိနေတာဖြစ်ပြီး ရင်သားသေးပါတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတွေက ဒီအဆီလေးတွေနည်းနေတာပါတဲ့။ ဒါဆို လိမ်းဆေးလိမ်းရုံနဲ့ ရင်သားကြီးထွားဖို့ဆိုတာ သိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။
အများအားဖြင့် ဒီလိမ်းဆေးတွေဟာ သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ ထုတ်ထားလေ့ရှိပြီး ဒီသဘာဝပစ္စည်းတွေကပဲ အမျိုးသမီးဟော်မုန်း အီစတိုဂျင်ထွက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကတော့ အီစတိုဂျင်ဟော်မုန်းကြောင့် ရင်သားဖွံ့ထွားလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ ဒီလိမ်းဆေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တိကျတဲ့ သက်သေ၊ ရလဒ်ရယ်လို့တော့ မရှိပါဘူး။ လိမ်းဆေးတွေရဲ့ ရလဒ်က လူတစ်ယောက်ခြင်းဆီရဲ့ ဟော်မုန်းပမာဏ၊ တုံ့ပြန်မှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးကွာခြားနိုင်ပါတယ်တဲ့။တစ်ချို့က သိသာတယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ကျမှ မသိသာတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် တချို့လိမ်းဆေးတွေကျတော့လည်း အီစတိုဂျင်ဟော်မုန်း ဖြစ်စေတဲ့ DEHA ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်းပါပါတယ်။ ဟော်မုန်းကြောင့် ရင်သားကြီးထွားတာပိုသိသာနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အန္တရာယ်ပိုများပါတယ်။ ရင်သားယောင်ယမ်းတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် DEHA ပါတဲ့ ပစ္စည်းကိုတော့ ရှောင်ကြည်သင့်ပါတယ်။ဘယ်လိမ်းဆေးမဆို ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စေလို့ ရေရှည်စွဲသုံးရင်တော့ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး ရင်သားတင်းရင်းအောင်လုပ်မယ်၊ သင့်တော်တဲ့ Bra size ကို ရွေးဝယ်ဝတ်မယ်ဆိုရင် ယုံကြည်မှုရှိရှိလှပစေမှာပါ။